Ruushka, Mareykanka, Turkiga iyo Midowga Yurub waxay leeyihiin xiisado militari oo xuduud la leh Bariga Dhexe | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Ruushka, Mareykanka, Turkiga iyo Midowga Yurub waxay leeyihiin xiisado militari oo xuduud la leh Bariga Dhexe
Quwadaha waaweyn ayaa hada raadinaya iska hor imaad caalami ah xuduudaha Bariga Dhexe waa hal meel oo ay isku riixayaan midba midka kale, sida taarikada tectonic.
Marka Lasoo Goobo Xiisada Dalalka Kor Aynu Ku Xusnay, Mareykan iyo Ruushka ayaa fulinayaan isqabqabsi diyaaradeed midba midka kale, halka Turkiga iyo kuwa ka soo horjeedaba ee badda Mediterranean ay wadaan dhoolatus militari.
Farriimaha Dagaalka waa cad yihiin: Quwadaha waaweyni hada waxay raadinayaan iska hor imaad caalami ah , xuduudaha Bariga Dhexe waa hal meel oo ay iska riixayaan midba midka kale, sida taarikada tectonic.
Dhawaan Mareykanku wuxuu Diyaaradahiisa bambooyin B-52 u Duuliyey Dhulka Ukraine wuxuuna Dulmaray dhul uu Ruushku xukumo ee Crimea iyo meelo kale.
Tani waxay timid ka dib markii Ruushku uu ku Joojiyey Diyaaradaha Bomba Xambaarka Maraykanka ee B-52s-badweynta Baltiga dhammaadkii Agoosto.
Digniinaha Diyaaradaha Bambooyinka ee Ruushka Iyo Kuwa Maraykanka Ee B-52 ayaa dhacay iyadoo Mareykanku isku dayayo inuu u xaqiijiyo NATO ballanqaadkeeda Inuusan saaxiib la Hayn Ruushka.
NATO waxay sidoo kale xiisad kala dhexeeysay Ruushka ka dib markii ay cambaareysay sumeyntii la sheegay in loo geystay qof ka soo horjeeday.
Warbixinnada bishii Ogosto waxay sheegeen in dagaalyahan Ruush ah uu xitaa ku xadgudbay hawada waddan ka tirsan NATO – sida muuqata oo Ah Denmark.
Dhoolotuska ugu dambeeyay waxaa fuliyay Diyaaradaha Ruushka ee Su-27s. Caqabad kale, warbaahinta TASS ee Ruushka ayaa leh, waxay dhacday dhammaadkii usbuuca iyadoo sideed dayuuradood oo Ruush ah ay u dagaallamayaan inay ka hortagaan seddex Diyaaradood ee Maraykanka US B-52s badda Madow.
Afar diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo noocoodu yahay Su-27 iyo afar diyaaradood oo nooca Su-30 ah oo ka tirsan waaxda difaaca cirka ee Koonfurta Milatariga ee hawlgalka ku jira ayaa loo diyaariyey inay ka hortagaan diyaaradaha ciidamada cirka ee Maraykanka ee dul maraya Badda Madow iyo Badda Azov, iyada oo ujeedadu tahay in laga hortago maraakiibtooda aan la fasaxin. ku soo xadgudubka hawada Ruushka, ”ayey yiraahdeen Ruushka.
Digniinaha ayaa dhammaantood ku saabsan Mareykanka iyo Ruushka oo muujinaya awooddooda. Xiisado isku mid ah ayaa ka dhaca agagaarka Alaska. Waa wax walba oo ku saabsan u dagaallanka dagaalkii qaboobaa .
Mareykanku wuxuu dib uga guranayaa “amarka adduunka cusub” ee 1990-meeyadii. Si kastaba ha noqotee Mareykanku wali wuxuu sii xoojiyaa Awoodiisa Inuu Sii Ahaado Midka Hogaamiya adduunka oo dhan.
Istaraatiijiyadda difaaca qaranka Mareykanka waxay ku talogashay xiisada Shiinaha, Ruushka iyo Iiraan. Kuwaas waxaa loogu yeeraa “fac-dhow” ama hanjabaadyo goboleed.
Dhanka kale, NATO lafteeda ayaa xiisad gudaha ka dhexeysa Griiga iyo Turkiga.
Turkigu wuxuu noqday mid dagaal badan . Hoggaanka Turkiga wuxuu maalin kasta u hanjabayaa Giriigga, isagoo si maldahan u sheegaya isku dayga hadda ee lagu doonayo in lagu qabsado qaybo ka mid ah Suuriya, Ciraaq iyo Liibiya iyo xitaa Qudus.
Turkiga hada waxaa hogaamiya Dowlad taageerta Ikhwaanul Muslimiin waana mid kamid ah dowladaha ugu neceb Israa’iil aduunka.
Waqtigaan la joogo, Turkiga wuxuu hadda la sameynayaa dhoolatus dhanka badda ah oo ay la sameynayaan Jamhuuriyadda Waqooyiga Qubrus ee Turkigu. Turkiga waa ummada kaliya ee u aqoonsan Waqooyiga Qubrus dal.
Mareykanka iyo Faransiiska ayaa Hada Doonaya cunaqabateynta hubka ee saaran Qubrus Giriiga In la Qafiifiyo – oo xubin ka ah Midowga Yurub – maadaama ay aad ugu sii dhowaaneyso Israel.
Tani waxay dejisay suurtagalnimada isku dhaca Bariga Dhexe iyadoo Turkiga uu sheeganayo dhul ballaaran oo ka mid ah sheegashada tamarta Giriigga oo ay ku jiraan dhuumaha la qorsheeyay ee Griiga ilaa Israel.
Dhoolatuska milatari ee Turkiga shan maalmood soconayo ayaa imanaya toddobaadkan, taas oo ah toddobaad ka dib dhoolatusyo waaweyn oo ay sameeyeen dalalka Griiga iyo Turkiga , Imaaraadka iyo Faransiiska Waxay Tageerayaan Giriiga sidoo kale Waxaa Jira dhoolatuskii ciidamada badda ee Masar dib markii Turkigu u soo diray maraakiibta badda si ay u galbiyaan markab cilmi baaris ah oo u dhow Crete.
Imaaraatka Carabta oo dhawaan ogolaaday xiriirka ay la leedahay Israel ayaa u arka hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan inuu noqday mid dagaal badan.
Warbaahinta ka socota Khaliijka ayaa ku tilmaamaysa Turkiga mid “garaacaya durbaannada dagaalka” dhibaatona ka abuuraya dhammaan deriskeeda.
Dhanka kale Turkigu wuxuu Ruushka ka iibsanayaa nidaamka difaaca cirka ee S-400 si uu ula tartamo NATO, in kasta oo Turkigu xubin ka yahay NATO.
Turkiga wuxuu ku sii jeedaa isku dhac dhici kara. Sidoo kale Mareykanka iyo Ruushka ayaa abuuraya xiisado weyn.
Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa muujiyay doorka Ruushka ee Liibiya iyo sida Turkiga uu u kordhiyay iskahorimaadka Liibiya.
Israel arimahan Mareykanku waa xulafada ugu dhow Israel. Xiriir diblomaasiyadeed oo cusub oo lala yeesho Kosovo ayaa ah hal tusaale oo taas ka mid ah, sidoo kale taageerada Mareykanka ee xiriirka Israel iyo waddamada Khaliijka.
Si kastaba ha noqotee Israel iyo Ruushka ayaa wadahadal joogta ah ka yeeshay arrimaha Suuriya.
Intaas waxaa sii dheer Turkiga wuxuu mar ahaan jiray isbahaysi Israel laakiin wuxuu hadda taageeraa kooxda Xamaas. Taasi waxay ka dhigan tahay in dhammaan xiisadahaan cusub ay leeyihiin culeysyo waaweyn oo ay u qabaan Israa’iil.
Israa’iil waxay ku sii dhowaanaysaa Giriigga, Qubrus iyo Imaaraatka maaddaama uu Turkigu ka xanaajinayo badda Mediterranean-ka.
Mareykanka dhexdiisa Waxaa kajira olole firfircoon oo taageeraya Turkiga wuxuu isku dayayaa inuu saameyn ku yeesho siyaasadda Mareykanka, oo ay taageerto Qatar oo xulafo la ah Turkiga iyo Iiraan.
Trump waxaa Loo Badinayaa Inuu Yahay maamulka Ay iskugu Dhow yahiin Turkiga Ama xataa Ruushka,Iyadoo Xisbiyada Trump La tartamaya Ku eedeeyeen In Ruushku Farogalinayo Doorashada.
Trump In Kasta oo uu Tusayo Dalkiisa Maraykanka Iyo Xulufadiisa Inuu kasoo horjeedo Ruushka Ama Xitaa Turkiga Arinta Sidaasi Maaha,waxaa Loo Badinaya Saxiibada Ugu Dhow Inay Yahiin.
Si kastaba ha noqotee isla waqtigaas Mareykanka ayaa ugu dambeyntii ka cabanaya Turkiga oo ku saabsan taageerada Hamas.
Cayaartu way socotaa ,xiisadaha ka jira Badda Madow iyo Bariga Dhexe ee Marintigana hadda waa garoonka lagu ciyaarayo, Ciyaar Weyn oo cusub oo saameyn caalami ah ku leh maaddaama taarikada siyaasadeed ee tectonic ay iska soo horjeedaan midba midka kale.
Calaamado Kale oo Muujinaya Trumo oo Leh Ruushka Maaha Cadowga Maraykanka ee Chiinaha Ayaa Ah,Waa Mid Kale oo Xulufadiisa Kaga xanaajisay.
CNN Ayaa Sheegtay Qaabka Sunta Dilaaga Maraykanka uusan Uga Baxsan Karin Qofkasta oo Ruushka Mucaaradku Ah,dal Kasta oo Uu Joogo.
VIDEO: Turkiga Awood Yaab Leh Soo Bandhigay Ruushka Lasameynaya Dhoolotus Ka Dhana Giriiga
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo sii wada dadaalkiisa ku aadan inuu saameyntiisa shakhsiyadeed ku yeesho adduunka oo dhan iyo faragelinta dimuqraadiyadda Mareykanka ayaa lagu eedeeyay inuu adeegsaday sunta neerfaha si uu u sumeeyo mid ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeedda, Madaxweyne Donald Trump wuxuu jabiyay aamusnaantiisii ​​dhowaa ee Ruushka iyo weerarka. Alexey Navalny, oo ugu yeeray “musiibo” laakiin wuxuu carabka ku adkeeyay inuu xiriir wanaagsan la leeyahay hogaamiyaha Ruushka.
“Ma aqaan dhab ahaan waxa dhacay. Waxaan u maleynayaa inay tahay mid naxdin leh. Waa wax laga xumaado; ma ahan inay dhacdo. Wali ma hayno wax caddeyn ah weli, laakiin waan eegi doonaa,” ayuu yiri Trump Jimcihii shirkiisa jaraa’id ee Aqalka Cad.
Isaga oo ka jawaabaya su’aalo dheeri ah oo la xiriira arrinta wuxuu isku dayay in uu u leexiyo dhanka uu jecel yahay Trump, asaga oo ku andacooday in waxa Shiinuhu sameynayo ay “aad uga xun yihiin”.
“Waan la jaanqaadaa Madaxweyne Putin.”Ma jirin wax tixraac ah oo ku saabsan dadaalka Ruushka ee faragalinta siyaasada Mareykanka ka dib waka Khamiista ee ahaa in xog sir ah oo ay soo saartay Waaxda Amniga Gudaha ay ka digtay in Moscow ay isku dayayso inay shaki ka abuurto daacadnimada doorashada 2020 iyadoo la kordhinayo sheegashooyinka beenta ah ee codeynta boostada lagu dirayo. taasoo keentay khiyaano baahsan.
Previous article“MW Deni wuxuu Muqdisho u joogaa danaha Imaaraadka” – Dhoobo Daareed
Next articleDAAWO VIDEO:Sheekh Sudais oo Sheegay Xiriirka Israel In La Wanaajiyo oo Buuq Aduunka Ka Abuurtay Culimada Aduunka